Utamatisi kunye netyuwa yesosi ye-pasta enevidiyo | Ukupheka kweKhitshi
Utamatisi kunye ne-tuna sauce ye-pasta
Kwiveki ephelileyo sabona enye iqhinga lokwenza i-pasta ingagcini nasemva kokupheka usuku kwaye sele efrijini ubusuku bonke.
Isosi ebendiyisebenzisa ngeso sihlandlo yile itumato kunye ne tuna ukuba, emva kokuzama iindlela ezahlukeneyo zokwenza, le yeyona ihleli ikhethwayo.
Ndiza kukuxelela indlela yokulungisa i-tomato sauce kunye ne-tuna ye-pasta:
Isidanga sobunzima: Kulula
Ixesha lokulungiselela: Imizuzu ye15
2 Ukulungiselela i-tomato kunye ne-tuna sauce kwi-pasta
3 Iingcebiso zokupheka
IPasta ukungcamla (bala apha i isixa sepasta ngomntu ngamnye)
Iitoti ezi-3 ze ityhuna kwioli yeoli
2 Iipepile (oluhlaza olunye kunye nobomvu)
2 amazinyo e igalikhi
1 iphakathi inakho ugxile kwitumato (inokutshintshwa ibe yeyakho isonka soloko okanye nokuba ngumnini-ndlu)
1 itispuni ye pepper
1 itispuni ye ikumin
Intwana encinci ye i ginger umgubo
Ukulungiselela i-tomato kunye ne-tuna sauce kwi-pasta
Esipanini okanye kwipani yokutshiza, fudumeza ioyile kwenye yeetoti zetyhuna (okanye ezimbini xa ubona ukuba ayonelanga). Xa kushushu yongeza amazinyo e igalikhi sika iziqwenga. Ngelixa zibrowning, sika iipepile zibe ngamaqhekeza amancinci kwaye xa ugqibile ukongeza nazo. Hlanganisa yonke into kunye kwaye mayipheke imizuzu embalwa.
Xa sele bekulungele ukongeza ugxile kwitumato kunye namanzi de ufumane isosi engaguqukiyo (ukuba uyayisebenzisa I-sauce enamathanga okanye eyenziweyo Akukho sidingo sokongeza amanzi), yongeza pepper, i ikumin, i i ginger, la sal kunye ityhuna (ikhutshwe kakuhle ioyile).
Shiya imizuzu embalwa emlilweni kwaye yiyo loo nto. Kuya kufuneka ulungiselele ipasta ngokwemiyalelo yomenzi okanye ngokulandela encinci isifundo seveki ephelileyo kwaye ungeze salsa. Umdla wokutya ibon!.
Xa usongeza isosi kwipasta, ufefe ngayo itshizi egayiweyo kwaye gratin kwi-oveni, isityebi, isityebi!
Njengoko benditshilo ngaphambili, le sauce ihleli iyintandokazi emva kokuzama iindlela ezahlukeneyo zokulungiselela tomatoe sauce kunye ityhuna for pasta, ke bendisoloko ndiyiphinda ixesha elininzi. Olunye utshintsho oluncinci endakha ndalwenza xa ndilahlekile isithako sele:
Ukuba bendingenayo ipepile ebomvu, bendizakudibanisa ezimbini eziluhlaza.
Ukuba andinayo igalikhi, ndiyifaka enye endaweni yayo anyanisi idayisi.
Kwaye ungongeza ezinye izinto, ukhetho endilukhethayo yilo amakhowa.
Ukuba uhlala usenza ipasta unokwenza isosi eninzi kwaye uyigcine kwisikhenkcezisi. Yilinde nje ukuba ipholile ngokupheleleyo kwaye uyibeke kwiijagi ezisondele kakuhle, kodwa ungazigcwalisi phezulu. Xa uyifuna, shenxisa ngokulula kwaye kwimizuzu emi-5 uyakulungisa isitya sakho se-pasta.
Ixesha lokulungiselela Imizuzu ye5
Ixesha lokupheka Imizuzu ye15
Ixesha elipheleleyo Imizuzu ye20
Iikhilokholi ngokusebenza 80
Umbhali kunye nomhleli wezifundo kunye nevidiyo yokufundisa, ngakumbi enikezelwe kwi-DIY, ubugcisa, ubugcisa kunye nokurisayikilisha ... Jonga iprofayile>
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » IPasta » Utamatisi kunye ne-tuna sauce ye-pasta
Izolo ndenze le sauce, kwimeko yam ityhuna yendalo (ndikudyoli) kwaye yaphuma imnandi, indinike isuntswana lintsonkothileyo lee-noodle.
Ummu Aisha sitsho
Ndonwabile ngokwenene ukuba iphume kakuhle! Ndityikitya ityhuna yendalo, esempilweni kwaye ngokuqinisekileyo iya kuba ngcono kakhulu ^ _ ^ Ngexesha elizayo uyazi, undazise kwaye kwimizuzu eli-10 uyakundifumana apho hahaha; )
Enkosi kakhulu malunga nezimvo zakho kunye nokuthemba iiresiphi zethu.
Phendula Ummu Aisha
Sisityebi, ndityebile isosi… ndenze umxube wepasta, isipirali, imacaroni kunye neeribhoni ... Ndixhomekeke kakhulu kwiindlela zakho zokupheka, njengetupper yonke imihla kwaye ndihlala ndifumana into kwiiresiphi zakho ... enkosi ngezo zimvo !!!!!!
Siyavuya kuba uyazithanda iindlela zethu zokupheka kwaye le sauce ibimnandi kakhulu. Enkosi ngokusifunda nangamagqabaza akho! ; )
Uyiqikelele ingcinga yam.Namhlanje ndiza kuyenza.Yisosi emnandi kwaye ndiyidlulisile iresiphi kwisiqingatha sehlabathi.
IGretyibel villalobos sitsho
Ndimele ndivume ukuba lixesha lokuqala ukuba ndilandele iresiphi kwi-Intanethi, kule meko ndingaphandle kwelizwe lam kwaye le sauce yetyhuna yindabuko evela kwilizwe lam kwaye bendifuna ukuyizama ... Inyaniso yile, yayimangalisa, ndiyabulela ngokwabelana ngale ndlela ilula kodwa engakholelekiyo .. Ndongeze ikoriander encinci ekugqibeleni kunye ne-voila! Kakuhle kakhulu!!!
Phendula Gretyibel Villalobos
Artichoke, iavokhado kunye nesipinatshi
Irayisi kunye ne tuna isaladi